BWC074 - OMG Mini Light nauyi Body Worn Camera with Super Video Compression - 20-25 Hrs maka 32GB [Enweghị ihuenyo LCD]
BWC074 - OMG Mini Light ክብደት Ara Nwa Ejiri Onwe ya na mgbakwunye Super Video - 20-25 Hrs maka 32GB [Ọ dịghị ihuenyo LCD]
N'ihu ndekọ Record - Nnukwu bọtịnụ ihu igwe dị n'ihu bụ ezigbo njirimara nke ndị ahịa chọrọ, n'ihi na ọ dị mfe ịchọta bọtịnụ REC ịmalite ndekọ, otu ndekọ igodo.
Ihe dị ka awa 10.5 zuru ndụ ndụ batrị 720P - N'ihi usoro H22 dị obere arụmọrụ oriri ike dị ala. Ngwaọrụ a nwere ezigbo nguzi n'etiti ndụ batrị na nha igwefoto. Ya mere o nwere ike idekọ awa 10.5 na-aga n'ihu na-edekọ ndụ batrị!
LCD n'elu - Obere LCD dị n’elu iji gosipụta Nchekwa, Batrị, Ọnọdụ Ndekọ, GPS, WIFI
1440p super mkpebi mkpebi zuru oke - Mkpebi vidiyo 1440P na ogo ogo 140 na-eme ka Igwe Ọdụ a-Worn bụrụ nnukwu ngwaọrụ iji jide ihe ị hụrụ / mkpa.
WIFI - Ihe karịrị 10 mita WIFI na-enuba site na ama, nwere ike ibudata vidiyo ma ọ bụ zipu vidiyo na isi
GPS mkpado - Enwe ike soro ma ọ bụ ihu ọnọdụ ezigbo nke ngwaọrụ ahụ.
Inhibidoro ìhè abalị ọhụụ - Automatic infrared abalị ọhụụ ndekọ. Ihe ruru Mita 10 nwere ihe onyonyo a na-ahụ anya.
Ntinye vidiyo H.265 & H.264 - Ngwaọrụ a nabatara usoro Ambarella H22 kachasị ọhụrụ na teknụzụ H.265. H.265 ga-eme ka vidiyo igwefoto ihe dịka 50% dị obere karịa obere vidiyo H.264
Akụkụ: 83mm * 56 mm * 23mm
Ibu ibu: 123g
Pixel dị elu: 32 M(6144×3456 16:9) (5M/10M/12M/16M/21M/32m)
Mkpebi vidiyo: 1440p 30 / 1296 30P / 1080 30P / 720 30P / 480 30P
Otu Ihe Mgbapụta: Kwado otu ndekọ bọtịnụ
Oge ndekọ / Ndekọ ndekọ: Ee
White ikanam: Ee
Igwe okwu: Igwe na-arụ ụlọ dị elu.
Mark Mmiri: Njirimara Onye ọrụ, Oge na ụbọchị Stamp agbakwunyere na vidiyo.
Foto Max nha: 32 Megapixel Igwefoto
Picturedị Foto: JPEG
Usoro Vidiyo: Usoro ntinye vidiyo nke H.265 na H.264 maka nhọrọ
Ike Nchekwa: 32G (16GB / 64G / 128GB)
Agbapụ Foto n'oge Ndekọ:Ee
Video Ogo:Kacha mma / mma / nkịtị
Ihu LCD: Enweghị
Igodo nrụpụta: Ee
Igodo foto / igodo: Ee
Ndekọ Ndekọ: N'uzo 140 dị elu
Abalị Ọhụụ: Rue Mita 10 nke nwere Nchọpụta Anya
Clip: Igwe mebere igwe dị elu na Ntugharị ogo 360
batrị Type: 2800 mAH Lithium
Oge Nchaji: 4 awa
Ndụ batrị: 12 awa
Ọkwa batrị: Ngosipụta Nleba Anya
Ntọala Nka nọmba / nkeji: Gụnye ID njirimara nọmba digi 5 na NJ uwe ojii pepeni
Paswọdu chebe: Ka ịtọọ paswọọdụ nchịkwa iji nye ohere nhichapụ site na ngwanrọ. Onye ọrụ ga-ele vidiyo naanị mana enweghị ike ihichapụ ya.
Uzo mkpuchi: Ee
Oke olu: Ee
Na-arụ ọrụ Okpomọkụ: -30 ~ 60 Ogo Celsius
Nchekwa okpomọkụ: -30 ~ 60 Ogo Celsius
BWC074 - OMG Mini Light ክብደት Ara Nwa Ejiri Onwe ya na mgbakwunye Super Video - 20-25 Hrs maka 32GB [Ọ dịghị ihuenyo LCD] gbanwere ikpeazụ: August 14th, 2020 by admin